Tsy enta-mavesatra ny EDF sy Areva, fa milin’ny tetezamitan’ny angovo · Global Voices teny Malagasy
Tsy enta-mavesatra ny EDF sy Areva, fa milin'ny tetezamitan'ny angovo
Voadika ny 22 Janoary 2020 6:33 GMT
Ny 01 Oktobra, nitatitra ny lanjan'ireo antokon'olona afaka manampatra ny fahefan'ny volany amin'ny parlemantera ireo mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny France nature environnement. Miampanga ny Areva sy ny EDF ho “enta-mavesatry ny tetezamitan'ny angovo” izy ireo, tsy miraharaha ireo fampiasambola be dia be nataon'izy ireo tao anatin'izany sehatra izany. Satria tsy mbola matotra tsara ny angovo azo havaozina, mbola ankaherezina amin'ny alalan'ny vidiny misy antoka aloha ry zareo mandra-pahombiazany ara-toekarena, raisin'ireo mpisehatra tsy miankina an-tànana izy. Fa tsy mibosesika be eo am-bavahady izy irep. Am-piandrasana izany, mila ireny vondrona orinasa lehibe ireny foana i Frantsa mba hanaovana ireo fampiasambola ilaina amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ireny angovo ireny.
Hatreto, loharanona loza maro mety hitranga ireo tetikasa indostrialy momba ny angovo. Manomboka amin'ny sandan'ireo teknolojia ampiasaina. Ilaina ny fampiasambola goavana, indrindra fa hiatrehana ireo sanda raikitra. Mikasika ny sehatry ny angovo amin'ny rivotra ohatra, 75% amin'ny vidin'ny angovo avy amin'ny herin'ny rivotra no avy amin'ny sanda raikitra nateraky ny fanamboarana azy. Indrindra koa fa mety hisy fahasimbana ara-teknika lehibe kokoa izay mandrahona mivantana ny tombony azo avy amin'ilay fampiasambola ireny teknolojia ireny, izay tsy mbola matotra tsara ho an'ny sasany.
Manampy izany ny tsy fahatokisana ny lalàna rehetra izay nanelohelo ny sehatry ny angovo alaina amin'ny rivotra hatramin'ny volana Jolay 2014 ary izay nanakana ireo mpampiasa vola sy ireo mpiasan'ny banky tsy hanana fijery tena izy. Na androany aza, na dia efa navoaka tamin'ny gazety ofisialy aza ny didim-panjakana vaovao mikasika ny vidiny, mbola zavatra mampidi-doza foana tsy mora hirotsahana ny fanombohana tetikasa indostrialy amin'ilay sehatra.
Goavana be ireo olana. Mety hahatratra 4 hatramin'ny 5 taona ary hila fanomezan-dalana mialoha miisa 25 avy amin'ny fitondrana ny fanaovana tetikasa iray amin'ny sehatry ny angovo azo havaozina. Tamin'ny fahafantarana izany dingana henjana izany no nianteheran'ny orinasa « Oser », orinasa sahisahy amin'ny fampiasàna renivola, izay natokana amin'ny famokarana angovo maitso any Rhône-Alpes, tamin'ny famatsiambolam-panjakana sy tsy miankina tamin'ny 2013. Izany hoe mpamandrika mialoha miisa 8 no ilaina mba hahafahana mahazo 9.5 tapitrisa Euros. Nefa nilaina izany mba hananana ny fahafahana hamoaka sy handrafitra ireny tetikady sarotra be ireny.
“Fotoana izao hanamoràna ny fomba fitantanana, hametrahana haingana orinasa iray mikasika ny fahafahana mampandroso na tsia tetikasa iray, ary izany dia amin'ny fomba azo antoka”, hoy tokoa i Arnaud Gossement mikasika izany, mpisolovava manampahaizana manokana amin'ny angovo azo amin'ny herin'ny rivotra.
Raha toa ka mieritreritra izany ny faritra hafa sasany, tsy dia tafahoatra ny hetsika santatra toy izany. Mandra-piandry izany aloha, mbola mijanona ho taratasy tsy nahazo valiny ihany ireo hevitra tsara be rehetra ary tsy mivoatra ilay sehatra. Ao anatin'izany toejavatra izany, amin'ny fampandrosoana ireo angovo azo havaozina dia lehibe ny andraikitr'ireo vondrona lehibe, amin'ny fanànany tanjaka ara-bola eo am-pelatanany izay manome azy karazana faritra mampahazo aina ara-bola azy.
Raha toa ka voamarina ireo fiampangana nanoheran'izy ireo ny Total nataon'ireo mpikatroka avy amin'ny France nature environnement (FNE) izay nanao fihetsiketsehana tamin'ny Alarobia 01 Oktobra teo anoloan'ny Lapan'i Bourbon, dia tsy marina ny fiampangana ny EDF sy ny Areva ho “enta-mavesatry ny tetezamitan'ny angovo “. Satria raha tsy misy izy ireo, sarotra ny hahatratra ireo tanjona napetraky ny Governemanta tao anatin'ny lalàna mikasika ny tetezamitan'ny angovo izay maminavina ny hampiakatra ho 32% amin'ny taona 2030 ny anjaran'ny angovo azo havaozina ao anatin'ny fifangaroana angovo .
Ankoatr'izay dia mampiroaroa saina eny anivon'ireo ONG maro ny mikasika ny resaka famatsiambola, izy ireo izay sao tsy ho ampy ireo vola fanalefahana hetra, fampindramambola sy ny fandrisihana hafa amin'ny resaka hetra mba hanangonana ireo 10 miliara Euros notombanan'i Ségolène Royal. Misalalasa mihitsy azy izy ireo fa tsy ho ampy izany 10 miliara izany. Amin-dry zareo, 20 miliara no ilaina mba handrakofana ireo filàn'ny tetezamitan'ny angovo.
“Na izany aza, tena fantatray tsara fa tsy afaka hovatsiana ny tetezamitan'ny angovo raha tsy amin'ny fanetsehana faobe ny fampiasambola tsy miankina”, hoy ny solombavambahoaka Maitso Denis Baupin tao anatin'ny resadresaka nifanaovany tamin'ny Novethic.
Noho izany, tamin'ny Febroary 2014, rehefa nanararaotra ireo vokatra niakatra be ny EDF, vondrona Frantsay mpamokatra herinaratra mba hilazàny ny faniriany hampiasa vola (14 miliara Euros nokasaina tamin'ny 2015), ary rehefa fantatra fa mifototra amin'ny fampandrosoana ireo angovo azo havaozina ny iray amin'ireo laharam-pahamehany voalohany, indrindra amin'ny rano, ny rivotra sy ny masoandro, sarotra be ny hanohana ny hevitra hoe “enta-mavesatry ny tetezamitan'ny angovo” ilay elektrisianina.
” Marihan'ny fitomboan'ny angovo azo havaozina ny fahombiazana tsaran'ny fampandehanana ny asa atao, eo amin'ny 23% eo any Frantsa, izay midika fiakaran'ny famokarana ankapobeny ho an'ilay vondrona “, hoy i Henri Proglio tamin'izany fotoana izany, ilay Tale Jeneraly izay niraiki-po tamin'ity raharaha ity hatramin'ny niandohan'ny fepotoana fiasàny.
Amin'ny fomba azo tsapain-tànana, azo tanisaina ireo 1,4 GW avy amin'ny rivotra sy ny hazavan'ny masoandro izay trandrahan'ilay orinasa any Frantsa, ary koa ireo tobin-drivotra 3 izay efa iomanany hatao any an-dranomasina, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Courseulles-sur-Mer (Calvados) sy Fécamp (Seine-Maritime). Azontsika lazaina ihany koa ny zava-misy fa ny Areva no hany Frantsay mpanamboatra famokarana avy amin'ny rivotra an-dranomasina any Frantsa. Afaka ampatsiahivina ihany koa fa asa an'arivony maro no mifandray amin'izy ireo.
Mbola mijanona ho mpandray tombontsoa amin'ny tetezamitan'ny angovo ireny vondrona orinasa lehibe ireny. Raha tsy misy azy ireo, tsy azo eritreritina fotsiny tsotra izao ny faniriana tahaka izany. Ilaintsika ireo mpisehatra tsy miankina mba hananantsika politika mahomby amin'ny resaka angovo.